Забур 59 CARS - Nnwom 59 AKCB
Wɔto no sɛnea wɔto “Nsɛe No” sanku nne so. Dawid “miktam” dwom. Ɔtoo no bere a Saulo soma kɔwɛn Dawid fi sɛ wonkokum no no.
1Ao, Onyankopɔn, gye me fi mʼatamfo nsam;
bɔ me ho ban fi wɔn a wɔtaa me no ho.
2Gye me fi amumɔyɛfo nsam.
Gye me nkwa fi mogyapɛfo nsam.
3Hwɛ sɛnea wɔatɛw rehwehwɛ me akum me!
Nnipa a wɔn ho yɛ hu bɔ pɔw bɔne tia me
a emfi me mfomso anaa bɔne bi, Awurade.
4Menyɛɛ mfomso bi, nanso wɔayɛ krado sɛ wɔbɛtow ahyɛ me so.
Sɔre begye me; hwɛ mʼamanehunu!
5Wo, Awurade Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn,
nhu amumɔyɛfo nkontompofo no mmɔbɔ.
6Wɔsan ba anwummere,
wɔbobɔ mu sɛ akraman,
na wokyinkyin kuropɔn no mu.
7Hwɛ nea wɔfe fi wɔn anom,
wɔn anofafa mu nsɛm ano yɛ nnam sɛ mfoa,
na wosusuw se: “Hena na ɔbɛte yɛn nka?”
8Nanso wo Awurade, woserew wɔn;
wudi saa aman no nyinaa ho fɛw.
9Wone mʼAhoɔden, mehwɛ wo kwan;
wo, Onyankopɔn, ne mʼabandennen,
10me Nyankopɔn a metumi atweri no.
Onyankopɔn bedi mʼanim
na ɔbɛma mahwɛ wɔn a wɔbɔ me ahohora no haw.
11Nanso nkum wɔn, Awurade, yɛn nkatabo,
na me nkurɔfo werɛ amfi wɔn.
Wo tumi mu no tutu wɔn ase,
12Bɔne a efi wɔn anom,
ne wɔn ano nsɛm nti
ma wɔn ahomaso nkyekyere wɔn.
Abususɛm a wɔka ne atoro a wotwa nti,
13sɛe wɔn wɔ abufuwhyew mu,
kosi sɛ wɔn ase bɛtɔre.
Afei ɛbɛma asase so mmaa nyinaa ahu
14Wɔsan ba anwummere,
15Wokyinkyin pɛ aduan
na sɛ wɔammee a, wosu bobɔ mu.
mɛto wʼadɔe ho dwom anɔpa;
efisɛ woyɛ mʼabandennen,
me guankɔbea wɔ ahohia mmere mu.
17Ao mʼAhoɔden, mɛto ayeyi dwom ama wo;
wo, Onyankopɔn, ne mʼabandennen, me Nyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ.
AKCB : Nnwom 59